Ọkachamara Semalt: Mkpokọta Ntanetị na Mmetụta Ya Na Mmemme Ntinye Ntanetị
Ọrụ ntanetị nyere site na kọmpụta maara nke ọma mmemme nke wepu data sitere na ibe di iche iche dika ntuziaka gi. N'adịghị ka ndị nkịtị na ndị omenala ngwá ọrụ scraper , ihe ntanetị weebụ na-eche na ị na-agbanwe data ndị a na-adịghị edozi n'ime data a haziri ahazi, bụ nke a na-echekwa ma nyochaa na databank centralralized. Iji ngwá ọrụ a, ọ dị nnọọ mfe wepụ data site na weebụsaịtị dị iche iche. A na - emezi iwu ụfọdụ iji chebe ịgbanwere ozi nzuzo na nchịkọta ozi, ọwa ụzọ njem, na ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'Ịntanet. Ihe ntanetị weebụ na-esote iwu niile ma na-enweta gị data nwebisiinka na ihe nke sekọnd.
Ọrụ na arụmọrụ nchịkọta data:
Ma ị bụ onye mmemme, coder, ọkà mmụta, onye nta akụkọ, onye na-elekọta weebụ ma ọ bụ onye ọchụnta ego, ị ga - data iji melite arụmọrụ nke saịtị gị ma bulie azụmahịa gị - wired home network installation. Obi dị m ụtọ na onye ntanetị weebụ nwere ike ịmepụta ọtụtụ ọrụ mmepụta data na nkwa iji nye ihe ọmụma na usoro ndị dị mkpa dị ka CSV na JSON.
Nhọrọ dị iche iche nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ
N'ihi nnukwu ọchịchọ ya, ụlọ ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ na-ahọrọ ihe ntanetị maka weebụ maka ọrụ nchịkọta data. Ngwá ọrụ a ọ bụghị nanị nchapụta ma ọ bụ wepụ ihe ọmụma ahụ kamakwa ọ na-edozi njehie ma ọ bụ nyochaa onwe ya. Nke a pụtara na data anyị nwetara bụ enweghị ntụpọ na ruo akara ahụ. Ọ na-enyere ụlọ ọrụ aka iziga ọkwa gbasara ndị ahịa ha gụnyere mgbanwe ọnụahịa na n'ọkwá. Tụkwasị na nke ahụ, ntanetị weebụ na-enyere ụlọ ọrụ aka nyochaa nkọwa ngwaahịa na ahịa ha na ndị na-asọmpi ha.
Nyochaa ihu igwe na-agbanwe na ntanetị weebụ
Ọ bụ akụkụ kachasị anya ma dị iche iche nke nchịkọta weebụ. Ọ na-enyocha mgbanwe ihu igwe ma na-enyere ndị na-ahụ maka ihu igwe aka ilekwasị anya n'ọnọdụ ihu igwe n'ụzọ ka mma. Ngwaọrụ a na-ewepụta ozi site na ntanetị ozi dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti, ịnweta bụ ozi zuru oke gbasara gburugburu ebe obibi, mgbanwe ihu igwe, mmetọ na ihe ndị yiri ya.
Nke ukwu maka weebụsaịtị weebụ
Ọ bụrụ na ị guzobere ebe nrụọrụ weebụ e-commerce ma na-achọ iwepụta data site na saịtị dị iche iche dị ka Amazon na eBay, ị kwesịrị ịnwale web scraper. Site na ngwaọrụ a, ị nwere ike ijide n'aka na ịnweta ozi ziri ezi na nke ziri ezi dị ka nkọwa ngwaahịa, nkọwa ọnụahịa, utu ngwaahịa na ihe oyiyi ha. Ọ na-enyere ndị ahịa ahịa dijitalụ na ndị ọkachamara mgbasaozi mgbasa ozi aka ịkwalite ngwaahịa na ọrụ ha n'ụzọ ka mma. Site n'ozuzu ya, web scraper bụ ihe zuru ezu na bara uru data extraction ngwá ọrụ na ọtụtụ nhọrọ na atụmatụ.
Weghachite ma weebụsaịtị
Otu n'ime ihe kachasị mkpa ma kachasị mma nke mkpokọta weebụ bụ na ngwá ọrụ a weghachite ma ibe weebụ dị ike. Ọ na-agbanwekwa ọdịnaya weebụ n'ime data ndị nwere ike ịchọta ma na-enye ohere ịmepụta nhazi usoro nhazi. N'ihi ya, nchịkọta weebụ nwere ike ịmepụta data dị mgbagwoju anya na ebe nrụọrụ weebụ siri ike ma nweta ihe ọmụma sitere n'aka ha na nkeji nkeji.
Nhọrọ dị mma maka mbubata. io na Kimono Labs:
Bubata. io na Kimono Labs bụ ngwá ọrụ ntanetị weebụ abụọ a ma ama na Intanet. Ha na-abata ma n'efu ma na-akwụ ụgwọ nsụgharị ma mee ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ dị ugbu a. Ọ dị mma ịsị na Web Scraper bụ ihe ọzọ dị njọ ịbubata. io na Kimono Labs ma na-achọ nchịkọta, ịchekwa na nyochaa data bara uru maka ndị ọrụ ya. N'ihi ya, ngwá ọrụ a dị oke mma ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ịntanetị na nke offline.